Xidigta Virgo: astaamaha, asalka iyo quraafaadka | Saadaasha Shabakadda
Jarmal Portillo | 25/05/2021 10:00 | Astronomy
Sidii aan horey ugaga hadalnay qormooyin kale, Xiddigaha samada waa koox xiddigo dhalaalaya oo qaabab leh oo magacooda ku leh calaamadaha zodiac. Mid ka mid ah xiddigaha ugu caansan ee loo yaqaan 'zodiac' waa Xidigta Virgo. Xiddigani wuxuu magacan ku helayaa jamac tiro badan sababta oo ah xiddigo badan oo sameeya iyo baaxadda dhalaalka mid kasta oo iyaga ka mid ah.
Sidaa darteed, waxaan u hibeyn doonnaa maqaalkan si aan kuugu sheegno dhammaan astaamaha, asalka iyo hal-ku-dhigga kooxda Xiddigaha.
2 Quraafaadka xiddigiska Virgo
3 Xiddigaha waaweyn ee xiddigta xiddigta Virgo
Virgo waxay 2º koonfur uga xigtaa wareeggan. Qeybta koonfureed, Virgo waa xiddig dayrta waxay ku taalaa inta udhaxeysa 30º iyo 40º waqooyiga Centauri. Spica, oo ka mid ah xiddigihiisa waaweyn, waxay qiyaastii ku taal bartamaha 100 middle arc, oo u dhexeysa labada tilmaam ee ugu horreeya ee cirridka: Antares (laga bilaabo Scorpio) iyo Regulus (laga bilaabo Leo).
Xiddigta Virgo waa mid ka mid ah xiddigaha ugu waawayn ee cirifka circa, oo leh laba jibbaar ku dhowaad 1300º, oo keliya ay dhaaftay kooxda Xiddigta Hydra ee 1303º, waxay ku jirtaa dhulbaraha samada, waana laga arki karaa labada daaqadood bilaha Febraayo illaa Ogosto. Sidoo kale waa calaamadda ugu weyn ee burji, sidaas darteed qorraxdu way dhex joogtaa in ka badan 40 maalmood, gaar ahaan 45 maalmood, oo ah bisha qorraxda ugu dheer. Dabeecada Virgo waa inuu aad ugu dhow yahay cirifka woqooyi ee Milky Way ama galaxy, taas oo macnaheedu yahay inaan leenahay dariishad samada u furan, oo iska indha tiraysa Caano-mareenka iyo kutladaha xiddigo caalami ah.
Dhinaca kale, lama arag beero xiddigo leh ama kooxo xiddigo ah. Waa wax lala yaabo in la qiyaasi karo boqortooyada galaxyo waaweyn oo telescope iyo xiddigo yar leh. Virgo waxaa xuduudo ka ah xiddigaha kala ah Butes iyo Coma Belenica, oo Leo ka xigta dhanka bari, dhanka koonfureed oo ay ka xigto, Corvus iyo Hydra dhanka galbeed, iyo Libra iyo Sepens Kapu oo dhanka galbeed ah.
Xidigta xiddigta ah ee Virgo waa fududahay in laga fiirsado dhulkeenna woqooyi waxaana loo adeegsan karaa tilmaan ahaan si loo aqoonsado xiddigaha kale. Virgo waxaa ku jira tiro badan oo galaxyo fog ah, kuwaas oo qaarkood laga arki karo teleskoobyada illaa teleskoobyada cabirkoodu dhexdhexaad yahay. Qorraxdu waxay dhex martay kooxdan xiddigta Sebtember 16 ilaa Oktoobar 30.
Sida loo yaqaan "zodiac", xiddigani wuxuu u dhexeeyaa Libaax galbeedka iyo dheelitirka bariga. Waa xiddig aad u weyn (xiddigta labaad ee samada ka dambeysa Hydra) waana mid aad u da 'weyn. Virgo waxay kaloo calaamadeysaa xiddigta burji, taas oo u dhiganta qaybta 30 ° ee dayax-gacmeedka qorraxda ka gudba Ogosto 24 illaa September 22.
Quraafaadka xiddigiska Virgo
Caqiido ahaan, xiddigta Virgo waxaa loola jeedaa ilaahadda Ishtar, oo u tagtay cadaabta si ay u doonato inay jacaylkeeda ugu beddesho jacaylka ilaaha Tammuz, oo loo yaqaan goosashada. Markii ilaahaddu cadaab gashay si ay u hesho gacaliyaheeda, way awoodi wayday inay ka tagto, taasoo keentay adduun cidlo ah Halka ilaahadda Ishatar ay ku xanniban tahay cadaabta dadkuna ay daawanayeen duni murugo iyo cidla ah, ilaahyadii waaweynaa waxay go’aansadeen inay sii daayaan. Dhacdadan quraafaadka ah waxay la xiriirtaa dhacdo ka dhacday Griiga.
Waxay ku dhacday taariikhda Persephone, dhacdada waxaa qafaashay Haadees waana la hirgeliyay maxaa yeelay Persephone hooyadeed waa la afduubay Demeterna wuxuu ka hor istaagay goosashada inay keento dhammaan halaaggeeda.
Khuraafaadkani wuxuu si cad ula xiriiraa wareegga daaqsinka dhirta: abuurid iniintii xilliga dayrta; biqilka, guga iyo miraha iyo goynta xagaaga. Labada xiddig ee waaweyn: "Spica" dhegta iyo "Vendiamiatrix" goosashada canabku waxay calaamadeeyaan xilliyada goosashada badarka iyo goynta siday u kala horreeyaan waxayna ku xirmaan asalka khuraafaadkan.
Xiddigta Virgo waa dheddig, waqtiyadi horena waxay ka timaaddaa dhaqankii Asiriya-Baabiliga, oo si dhow isugu xidha taranka iyo nadaafadda, daahirnimo.
Xiddigaha waaweyn ee xiddigta xiddigta Virgo
Xiddigta Virgo waxay ka kooban tahay koox xiddigo aad u dhalaalaya sida spica, zavijava, porrima, iyo vindemiatrix. Mid kastaaba wuxuu leeyahay dhalaal gaar ah iyo midabkiisa laakiin wadajirka waxay siinayaan qurux xiddig. Aynu aragno mid kasta oo ka mid ah xiddigaha waaweyn ee ku jira xiddigta Virgo:
Waa xiddigta ugu ifka badan qaabkeeduna wuxuu u egyahay shaxan matalaya haween caadi ah oo ku wajahan dhulbaraha. Elliptical waa waqooyiga waxayna ku taal 2 darajo koonfurta. Spica waxaa laga helaa inta u dhexeysa Antares ama Scorpio iyo Regulus ama Leo, oo loo yaqaan tilmaamayaasha cabbirkooda koowaad ee ka jira xadka hoose iyo kan sare, taas oo ah, midig bartamaha 100º arc.
Xiddigaan Spica-ka ah waxaa loo yaqaanaa ¨the spike¨, cabirka midabkiisu waa 1 maxaa yeelay waxay ka timid buluug illaa buluug-caddaan.
30 waa xiddig leh qeexitaan muuqaal oo liita. Waxay leedahay cabir dhan 3.8 nuurkiisuna wuxuu la xiriiraa hooska huruudda oo umuuqda mid daruur ama cirro leh. Micnaha ay khubarada cilmiga xiddigistu u bixiyeen xiddigani waa gees.
Waa xiddig magaceedu ku jiro soo bandhigida ilaahadda Roomaanka ee Porrima. Waxay leedahay cabbir dhan 2.8 waxayna leedahay midab huruud-cad.
Xiddigtaan waxay leedahay magaceeda oo ka yimid erayga goosad. Waxay ka dhigan tahay ficilkii guridda. Waxay leedahay baaxad dhan 2.8 waxayna leedahay midab jaalle ah gebi ahaanba.
Sida meeraha matalaya xiddigta Virgo, waxaan leenahay meeraha Mercury. Maaddaama irgo yahay midka lixaad ama calaamadaha burji, waxay siisaa qofka calaamadan leh xamaasad u leh faahfaahin kasta iyo xamaasad xaaladaha ay dadka kale u arkaan inay tahay wax aan qiimo lahayn. Taasi waa sababta ay uga dhigayso meeraha inay gacan ka geysato abaabulka shucuurta dadka.
Waxaan rajaynayaa in macluumaadkan aad waxbadan kaga baran karto xidigta Virgo, astaamaheeda iyo sheekooyinkeeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Astronomy » Xidigta Virgo